हात हेरेर भाग्य बताउने र विश्वास गर्नेहरु हो ! कस्ले भन्छ हात नहुनेको भाग्य हुँदैन ? | Rajmarga
हात हेरेर भाग्य बताउने र विश्वास गर्नेहरु हो ! कस्ले भन्छ हात नहुनेको भाग्य हुँदैन ?
यहाँ हातका रेखाहरु हेरेर भाग्य बताउनेहरुको कुनै कमी छैन । भाग्य र भविष्य बताउनेहरुको मात्र कमी होइन, त्यसमा विश्वास गर्नेहरुको पनि कमी छैन । के त्यसो भए दुवै हात नहुनेको भाग्य नै हुँदैन ? यो कुरा धेरै हात नभएकाहरुले गलत सावित गरिसकेका छन् । त्यसैमध्येकी एक हुन् थाइल्याण्डकी पैचारामन सावाना ।
विकलांग भएकै कारण २३ वर्षको उमेरमा विद्यालयको पढाई सुरु गरेकी थाइल्याण्डकी पैचारामन सावानाको दुवै हात छैन ।
यति मात्र होइन, दुवै हात नभएर के भो त ? २३ वर्षको उमेरमा पढाई सुरु गरे पनि उनले मास्टर डिग्री पनि हासिल गरेकी छन् र वकालतका लागि प्रयास पनि गरिरहेकी छन् । उनले तमाम कठिनाइहरु पार गरेर यो उपलव्धी हासिल गरेकी हुन् ।
पढाईले सावानाको दायरा बढाएको छ। उनी भन्छिन्–म चाहँदिन कि कसैले यो भनोस कि म विकलांगताका कारणबाट के गर्न सक्थेँ के गर्न सक्दिनँ ….। म त्यो सबै नियम तोड्न चाहन्छु जुन विकलांग पीडितहरुका विषयमा समाजले बनाएको छ। एजेन्सी
Previous post: सावधान ! कुकुरले टोक्दा मात्र होइन चाट्नु पनि प्राणघातक हुनसक्छ, यस्ता हुन्छन् रोगको लक्षण
Next post: बाख्राको दुधले यसरी बढाउँछ यौनशक्ति